Booliska Somaaliya oo gacanta ku dhigay dad isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya(Sawirro). – Gedo Times
Booliska Somaaliya oo gacanta ku dhigay dad isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya(Sawirro).
Kadib howlgal ay xaafadaha degmada cabdi casiis ay ka sameeyeen ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ayaa waxaa ay gacanta ku soo dhigeen waxyaabaha maanka dooriyaha iyo dadkii isticmaalayay waxyaabahaasi.
Waxaana howlgalkan sameeyay ciidamo boolis ah oo sida gaar ah u tababaran,iyadoona dadkii isticmaalayay waxyaabahaasi maanka dooriyaha ay qabteen.
Booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay Dadkan isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya oo ay soo qabteen ciidamada booliska ah ayaa loo gudbin doono hay’adaha garsoonka dalka,iyadoona sharciga la horgeyn doono,maadaama dadkan dhibaato ku hayaan amaanka guud ee dalka sida ay sheegen booliska.
Ciidamada Amaanka ee Dowlada Soomaaliya ayaa mudooyinkii dambe waxaa ay howlgalo lagu xaqiijinayo Amaanka,iyo sidoo kale in gacanta lagu soo qabto dadka inta badan aad u isticmaalaya waxyaabaha maanka dooriyaha.
Horey Ciidamada Dowlada Soomaaliya ayaa howlgalo waxaa ay ka Sameeyeen xaafadaha Degmooyinka gobalka Banaadir,iyadoona sarakiisha Amaanka Dhowr jeer digniino ay u direen dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya.
Madaxda Galmudug iyo Ahlusuna oo gaaray dalka Jabuuti xili wali aan laxalin qilaafkii madaxda Galmudug”Sawirro”